हिमाल खबरपत्रिका | रुबी भ्याली रिपोर्ट
१२ वैशाख २०७२ को भूकम्पमा मृत्यु भएका चुलीमाया तामाङ र विकास तामाङको स्मृतिमा पुरु गाउँमा खडा गरिएको चौतारो ।
काठमाडौं उपत्यकाको उत्तर–पश्चिम किनारमा पर्ने ककनी र रानीपौवा बस्ती छिचोल्दै त्रिशूली नदी कटेर हामी बूढीगण्डकीको पानीढलो पस्यौं ।
तुवाँलोलाई तल छाडेर दाहिने पर्वतको काखतिर हेलिकप्टर मोडियो । गणेश हिमालको फेदमै पुग्दा भिरालो पाखा र खर्क मात्रै देखिए । क्याप्टेन सिद्धार्थ गुरुङले त्रिभुवन विमानस्थलबाट २३ मिनेटको उडानमा हामीलाई लिन्जो गाउँमा झारे ।
उत्तरी धादिङको यो भेकलाई काठमाडौंका प्रशासक र बौद्धिकले पञ्चायतकालदेखि नै परैबाट भए पनि नियाल्दै आएका हुन् । सोमदाङ भन्ने ठाउँमा एउटा खानी सञ्चालन गरिएको थियो भने यो क्षेत्रमा राजदरबार मातहतको सेतो ‘आलुएट’ हेलिकप्टर खूब ओहोरदोहोर गथ्र्याे । गणेश हिमालमुनिको यो इलाकामा रुबी र अन्य बहुमूल्य रत्न पाइने बताइन्छ । स्थानीय जनता र राष्ट्रिय ढुकुटीलाई ‘वाइपास’ गर्दै यसको गोप्य रुपमा पैठारी भइरहेको हल्ला धेरै वर्ष चलेकै हो ।
पर्वतारोहीको कुरा गर्दा यस भेकको भविष्य पर्यटन प्रवद्र्धनमा आधारित हुनुपर्ने हो । तर, लिन्जो गाउँका एक ठालु भन्छन्, “यहाँ के गर्न सकिन्छ भनेर हामीलाई कसैले बताउँदैन, त्यसैले कतार र मलेशिया जान बाध्य छौं ।” उनलाई कसले भनिदेओस्, २००५–०६ सालतिर मोहनशमशेरको शासनकालमा पश्चिमा पर्वतारोहीको नेपालमा पहिलो ‘एक्सपिडिशन्’ यहीं आएको थियो । बेलायती एच्. डब्लु. टिल्म्यान् एक नामुद आरोही तथा राम्रा लेखक थिए, जसले टोलीसहित गणेश हिमाल चढ्न कोशिश गरे । असफल भएपछि पूर्वतिर लाङटाङ र जुगल हिमाल क्षेत्रको अनुसन्धान गर्दै इन्द्रावती उपत्यका झरे । उनले लेखेको पुस्तक ‘नेपाल हिमालय’ नै यस रुबी भ्यालीको चिनारीको पहिलो स्रोत सामग्री मानौं ।
घाम ढल्कँदै जाँदा हामी पनि ठीक २३ मिनेटको हेली यात्रामा काठमाडौं उपत्यका फर्कियौं । क्याप्टेन सिद्धार्थ गुरुङको हातमा यसपालि बूढीगण्डकीको खोंच नभई सीधै मस्र्युङ लेक छिचोल्ने गरी हेलिकप्टर आकाशियो । लिन्जो र पुरु गाउँ माथिको जंगल–पाखामा चक्कर लगाउँदै हामीले पाङसाङ भञ्ज्याङ काट्यौं, करीब १२ हजार फिट नाघेर । तल हेर्छु त यतिको उँचाइ र अनकन्टारमा पनि अन्यत्र जस्तै डोजर–निर्मित बाटो बन्दै !
तर गर्ने कुरा धेरै देखिन्छन् । अधिकांश परिवारले आफ्ना बालबच्चा धादिङबेंसी अथवा काठमाडौं पठाउँदा रहेछन् यहाँको सरकारी स्कूलमा भरोसा नभएर । सडक जोडिन लागेको यस क्षेत्रमा तरुणहरू फर्केर यतै इलम गर्ने अवस्था सृजना गर्नु नै पहिलो योजना हुनुपर्‍यो । यसको लागि गणेश हिमालमा आधारित पर्यटन र पर्वतारोहणको सम्भावना छ । यहाँका घले र तामाङ युवा पर्यटन र पर्वतारोहण पथप्रदर्शकमा आकर्षित हुनुपर्‍यो, गराउनुपर्‍यो ।